Khuluma nomnyango wakho we-IT kuFirefox | Martech Zone
Khuluma nomnyango wakho we-IT kuFirefox
Lwesine, Disemba 4, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Ngicabanga ukuthi ngonakalisiwe esikhathini esidlule uma kukhulunywa ngeminyango ye-IT. Ngangisebenzisa inethiwekhi emsebenzini wami wokuqala futhi ngangiyinsizwa ephethe wonke amathoyizi emnyangweni (ngaphandle koMqondisi wami ngaleso sikhathi, ngangimthengela elilodwa kuqala).
Ukuhamba phakathi kwemisebenzi ehlukene kwezokumaketha nobuchwepheshe kungibeke ezinhlangothini zombili zomnyango we-IT ngakho-ke ngiyazi ukuthi kanjani kuyakhathaza ukungabi namathuluzi owadingayo. Yize kunzima kakhulu ukusekela, ngiyakholelwa ngokuqinile ukuthi ubuchwepheshe kufanele bulethe inqubekela phambili nokusebenza kahle. Ngeke ikwenze lokho uma uvaliwe. Umngani wami omuhle u-Adam Small, ogijima a Inkampani Yezokumaketha Yeselula lapha e-Indianapolis, ikubeka kahle ... ngumnyango wakho we-IT ukuvumela wena noma ukukhubaza wena?
Ngibuyele ohlangothini lwezokumaketha ngomsebenzi wami wamanje futhi ngizama ukudlala ngemithetho - kepha akulula. Ngiyazi yonke isoftware ephelele lapho ehlehlisa usuku lwami - futhi angikwazi ukusebenzisa noma iyiphi yayo. Ngikwi-PC manje kune-Mac yami ethembekile. Kuyinto ephazamisayo impela.
Ngilungele inselelo, noma kunjalo! Esikhundleni sokukhononda (ngaphandle kwebhulogi lami), ngidlala ngemithetho engcono kakhulu futhi ngizame ukuthola ukuthi yini ongakusiza. Omunye wabasindisi bami abakhulu ubelokhu esebenzisa iFirefox. Akusona isiphequluli esihle kuphela, kepha izengezo ziyamangalisa ngempela:
FireFTP - uhlelo oluhle kakhulu lwe-FTP engingaluqhuba ngqo kuFirefox. Kumahhala (kepha sicela unikele - uhhafu wayo yonke iminikelo iya esizeni eswele). Inakho konke okudingayo iklayenti le-FTP eliqinile!
Twitbin - iklayenti le-Twitter eligijima ngqo kubha eseceleni yeFirefox. Akushelelezi njengokusebenzisa iklayenti lakho, njenge I-Twhirl, kepha kuyabakhohlisa. Ngifisa ukuthi ngabe babeke amathebhu athile kuyo ukwenza kube lula ukusuka ekuphenduleni kuya kwimiyalezo eqondile, njll.
ColorZilla - Ngabe udinga ukususa umbala ekhasini lewebhu? Ithuluzi elihle elikhulu lokukwenza!
Greasemonkey - isengezo esimangalisayo esivumela ukuthi ubhale futhi ufake imibhalo yakho kumakhasi. Kunezigidi zemibhalo ekhangayo yeGreaseMonkey laphaya engakusiza nge-gmail nethoni yezinye izinhlelo zokusebenza. Hlola I-Greasespot okwakamuva!
QAPHELA: Sebenzisa i-CAUTION nge-Greasemonkey, kunemibhalo ekhona lapho ezozama ukufaka imininingwane yokungena kumawebhusayithi ezezimali.
IqOle - isengezo esimnandi esimangazayo esiguqula i-PC yakho noma iMac ibe yisilo sokuphequlula iMedia!
Ama-Foxclock - ingabe izindawo zesikhathi ziyakudida? Lesi isengezo esincane esisebenzisekayo esingakunika izikhathi zamanje emhlabeni wonke.
IScribeFire - kukhona nomhleli webhulogi ongamfaka ngqo kuFirefox esebenzisa iXML-RPC, okujwayelekile kuwo wonke amapulatifomu wokubloga wokuthumela okuqukethwe. Angiyisebenzisi lena, ngivame ukunamathela kusihleli se-ol ku-WordPress, kepha kusalungile!
Mhlawumbe ingxenye enhle yalokhu ukuthi awudingi amalungelo oMlawuli wokufaka lezi zengezo endaweni yangakini, ukuze ukwazi ukubeka amathuluzi amaningi avelele ngaphandle kokufaka iphutha kumuntu wakho we-IT. Thola abafana bakho be-IT ukufaka iFirefox namuhla! Vele, uma iFirefox iqala ukukuhlasela… ungashayeli ideski lakho losizo le-IT… qala ukususa ezinye zalezo zengezo!
Tags: -addadobeFirefoxizengezo ze-firefoxizengezo zokumakethaukubika
Kule mpelasonto: Impelasonto yokuqalisa yase-Indianapolis
Bambalwa Kakhulu Abangakwazi Ukubamba Amagciwane Anjengale!
Dec 4, 2008 ngo-9: 26 PM
I-cornucopia ebonakalayo yamathuluzi okukhiqiza.
Dec 4, 2008 ngo-9: 50 PM
KULUNGILE… Ngizophinda ngizame lokhu…. i-noscript iskriphthi isayithi lakho btw. Ngivumele i- marketingtechblog.com, kepha ngokusobala lokho bekunganele. Futhi angibonanga ukuthi iyiphi eminye engu-16 engayivumela….
Kepha kuze kube yilapho ezinye iziphequluli zisekela i-ActiveX, IE izohlala ibambe izinyawo eMinyangweni ye-IT.
Dec 4, 2008 ngo-9: 58 PM
I-ActiveX izobe ifile eminyakeni embalwa, ck, noma okungenani ishiywe ingashintshiwe… maka amagama ami. Alukho uhlelo lwewebhu okufanele ludinge ukufakwa futhi abashayeli bafakwe ku-Operating System. Akudingekile.
IMicrosoft isebenza kanzima ekwandiseni ukufinyelela kweSilverlight. Njenge-Flex / AIR, iSilverlight kuzoba yipulatifomu eyinhloko yokwakha iwebhu kumadivayisi wedeskithophu ngobuchwepheshe beMicrosoft. IHhovisi kuzoba yindawo yokuqala enkulu ezokwethula ngale ndlela.
Angikaze ngihlole isiza sami nge-noscript! Ngikholelwa ngokuqinile kulokho isipiliyoni sohlangothi lwamakhasimende esingaletha kusayithi. C'mon ck… ake sikungenise ku-2008
Dec 5, 2008 ku-9: 58 AM
Okwamanje, i-Active-X yenza izinto okungekho buchwepheshe obuzayo obungazenza.
Ake sithi ngifuna ungene ngemvume kusayithi lami eliphephile ngesifundi sokuphrinta ngomunwe. Kwenzeka kanjani lokho? Ukulawula okusebenzayo kwe-X.
Ngakho-ke kuze kube yilapho benza ukuthi isiphequluli sibe sengozini yokungena kuzikhombisi-ndlela zabantu, noma baqhamuke nokushintshwa kwepulatifomu kwe-Active-X… kuzohlala kuzungezile.
Dec 4, 2008 ngo-10: 10 PM
Ezinkampanini ebengiba nenjabulo ehola ama-ops ne-IT, senze iFirefox isiphequluli esizenzakalelayo (IE nayo ibikhona). I-caviat ukuthi abasebenzisi bethu bebenobuchwepheshe obuningi be-tech. Ngaphandle kokuthi usembonini elawulwa kakhulu, ukukhiya uhlelo okuningi kakhulu akusizi ngalutho. Ngingancamela ukuthi ochwepheshe bami bajahe izixazululo zendlela yokwenza abantu bami basebenze kangcono kunokuzama ukugcina wonke umuntu elayini.
Ukukhiya phansi yisikole esidala. Ukuqeqeshwa okufanele kanye nemfundo yikhona okwenza izinkampani ezithuthukayo zisebenze kahle kangaka.
Amasenti ami we-2 kuphela.
U-Apolinaras "Apollo" Sinkevicius
Dec 5, 2008 ku-11: 47 AM
Izinto ngeke zibe lula uma udlala ngemithetho. Kepha, njalo kuyisinqumo esingcono kakhulu ongasithatha isikhathi eside.
Uhlu oluhle lwe-firefox addons. Anginazo izengezo ezibalwe ku-firefox yami. Vumelana nawe ku-GreaseMonkey. Ngibhekane nezinkinga ezithile phambilini futhi izinto zilungile ngaphandle kwazo.
Dec 5, 2008 ngo-5: 50 PM
Kade ngisebenzisa iFirefox isikhathi eside manje kwesinye isikhathi ngiyakhohlwa iningi labantu lisasebenzisa i-IE.
Uhlu olukhulu lwezengezo. Empeleni bekufanele ngiziyeke izengezo zami ngoba bengifana nengane esitolo sikaswidi nabo isikhashana. Ngibe namathebhu anemibala, ukubuka kuqala kwe-auto, imigoqo yokulanda, wonke amayadi ayisishiyagalolunye!
Kuyahlekisa uma ubheka iziphequluli zabanye abantu zeFirefox. Ingxenye yesikrini sabo ithathwa ngamabha wamathuluzi wokungeza!
Dec 7, 2008 ngo-9: 59 PM
Okuhlangenwe nakho kwami ​​emsebenzini wami (hhayi-omusha-omusha) ukuthi bekufanele ngibonise ukuthi ngiyifanele iFirefox ukuze ngiyithole. Wonke umuntu usezingeni ku-IE, kepha ngemuva kokuthi ngikhombise isikweletu esincane somuntu “wokumaketha”, bangikhombise ifolda eyimfihlo yokungena kwiFirefox. Angazi ukuthi kungani wonke umuntu engenakho lokhu, ngicabanga ukuthi abafuni ukubhekana “nokuqeqeshwa.” Ukuza enkampanini evela ngaphandle noma kunjalo, sengivele ngiyazi ukuthi ngiyisebenzisa kanjani i-FF ukukhulisa umkhiqizo wami.
UJun 22, 2012 ngo-10: 52 AM
Ukuze uqinisekise umnyango wakho we-IT ukuthi iFirefox iyesabeka ngempela, mhlawumbe kufanele ubakhombise ukuthi abantu bazinikele kangakanani kusiphequluli. Ubufakazi bakho kungaba yilokhu Indilinga yesitshalo seFirefox. Angiboni noma yimiphi imibuthano yezitshalo enikezelwe kunoma yiziphi ezinye iziphequluli!